Wararka - Maxay Tahay Inaan Ahmiyad Siino Marka Aan Sameyneyno Naqshadeynta Naqshadeynta Cuntada
Cuntadu waa lagama maarmaan nolosha dadka. Naqshadeynta baakadka cuntada wanaagsan ma soo jiidan karto oo kaliya dareenka macaamiisha, laakiin sidoo kale waxay kicineysaa rabitaanka macaamiisha inay iibsadaan. Marka, waa maxay dhinacyada loo baahan yahay in fiiro gaar ah loogu yeesho naqshadeynta baakadaha cuntada?
Markaad dooranaysid qalabka baakadaha lagu rakibo, waa inaan tixgelinno arrinta badbaadada iyo ilaalinta deegaanka. Hadday tahay baakad gudaha ah ama baakad dibadeed, waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa xulashada qalabka. Iyadoo la raacayo mabda'a hubinta badbaadada cuntada iyo ilaalinta deegaanka, waa inaan doorannaa agab bey'adeed u fiican oo caafimaad qaba.
Qaababka qaabdhismeedka dhabta ah ayaa kicin kara awoodda wax iibsiga ee macaamiisha illaa xad. Tusaale ahaan, cunnooyinka fudud ee carruurta, qaabab kartoonno qurxoon ayaa lagu dooran karaa naqshadeynta baakadka, ama jilayaal kartoon ah oo caan ku ah carruurta.
Hordhaca qoraalka waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah naqshadeynta baakadaha. In kasta oo muujinta qoraalka ay ka yartahay muuqaal ahaan muuqaal ahaan garaafyada, haddana waxay si cad u tahay sawir. Noocyada kaladuwan ee cuntada sidoo kale way ku kala duwan yihiin muujinta ereyada, marka lagu daro astaanta cuntada caadiga ah, maaddooyinka, shatiyada ganacsiga nadaafadda, iwm., Nuqul ka mid ah dacaayadaha ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo kordhiyo isdhexgalka macaamiisha una sababa rabitaanka macaamiisha iibso
Xulashada midabku waa mid aad muhiim ugu ah baakadaha cuntada, midabbo kala duwan oo dadka u keenaya khibrad dareen oo kala duwan. Markaad dooranaysid midabada, waa inaan taxaddar yeelanaa. Midabada kaladuwan waxay ka tarjumi karaan astaamaha cuntada ee kaladuwan. Tusaale ahaan, gobollada iyo jinsiyadaha kala duwan waxay leeyihiin midabbo u gaar ah, midabbada kala duwanaantaana waxay ku kala duwan yihiin dhadhammo kala duwan. Marka waxaan u baahanahay inaan isku darno astaamaha cuntada lafteeda si aan u doorano midabada baakadaha.
Marka lagu daro tan kor ku xusan, waxaa jira dhinacyo badan oo u baahan in laga fiirsado marka la sameynayo naqshadeynta baakadaha cuntada, sida badbaadada habka socodka cuntada, ka-hortagga iftiinka, iwm, dhammaantood waxay u baahan yihiin in la tixgeliyo.